सुटुक्क विवाह गरेकी रश्मी तामाङ अमेरिका पुगेपछि विवाह भएकाे खुलासा – Nepal Press
सुटुक्क विवाह गरेकी रश्मी तामाङ अमेरिका पुगेपछि विवाह भएकाे खुलासा
२०७८ वैशाख २६ गते १६:४८
काठमाडौं । सुटुक्क विवाह गरेर अमेरिका उडिसकेपछि चर्चित मोडल रश्मी तामाङले विवाह गरेको खुलासा भएको छ । बैशाख १२ गते गोरखाका अनिल राना मगरसँग विवाह गरे पनि उनले विवाह गरेको कुरा उनि अमेरिका पुगिसकेपछि मात्रै खुलासा भएको हो ।
रश्मीले आफुभन्दा ५ वर्ष कान्छा अनिलसँग विवाह गरेकी हुन् । सबैजसोले विवाह गर्दा आफु भन्दा बढी उमेरको व्यक्तिसँग विवाह गर्न खोज्दा उनले भने कम उमेरका व्यक्ति राेजेकी छन् । किन भन्ने नेपाल प्रेसकाे प्नश्नमा उनले भनिन्, ‘यस्तो सोच भनेको नेपालमा मात्रै हो । यतातिर त्यस्तो केही पनि सोच हुदैन । मलाई पनि त्यस्तो केहि पनि लागेन । मलाई धेरै माया गर्ने मान्छे पाए, योग्य मान्छे पाए, यसैमा खुसी छु । उमेरले केहि पनि फरक पार्दैन ।’
अमेरिकाको क्लोराडोमा बस्दै आएकी रश्मी करिव ३ महिना अघि मात्र नेपाल आएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘नेपाल आउदाँ त्यस्तो विवाह नै गर्ने याेजना थिएन् । तर एकाएक विवाह गर्ने निर्णयमा पुगियो ।’ आफुले सामान्य तरिकाले हल्ला नगरेर विवाह गर्ने सोचेर गरेपनि अहिले भने जताततै हल्ला फैलिएको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘मैले विवाह गरेको एक साता मात्र वितेको थियो । अन्तरािष्ट्रय उडान बन्द गर्ने सरकारले निर्णय गर्यो । धेरै लम्बिएला भनेर काम पनि भएकाले चाडै फर्किए ।’ आफुले आफ्नो विवाह भएको कुरा सार्वजनिक नगर्ने सोच राखेपनि एक जना साथीले गर्दा सार्वजनिक भएको उनले बताइन । ‘एक जना साथीले खै तिम्रो विहेको फोटो भनेर माग्नुभयो । अनि फेसबुकमा हालेर बधाइ दिनुभएछ । त्यसपछि त जताततै फैलिहाल्यो ।’ उनले भनिन् ।
उनले विवाह गरेको सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा बधाइको ओइरो नै लागेको छ । किन विवाह सुटुक्क गर्नुभएको भन्ने प्रश्नमा उनको जवाफ छ, ‘कोरोनाको महामारी भएकाले हामीले मगर परिवारको सस्कृति अनुसार नै विवाह गर्यौ । अवस्था त्यस्तै भएकाले सुटुक्क गरेको हो । अब अवस्था सामान्य भयो भने नेपाल फर्किएर साथीभाइलाई पार्टी दिनेछु ।’
केहि समय अघि लोकदोहोरी गितको म्यूजिक भिडियोमा उनले राज गर्दै आएकी थिइन् । तर, पछिल्लो समय अमेरिकमा रहेकाले उनका म्यूजिक भिडियो बजारमा आउन बन्द हुन थालेको छ । आफु पछिल्लो समय बाहिर पनि बसेको र बिस्तारै मोडलिङ क्षेत्रबाट बाहिरिने सोचमा रहेको उनले बताइन ।
किन भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘यो मोडलिङ गर्ने समय भनेको धेरै होइन, १५–१६ वर्षदेखि त्यहि बढीमा ३० वर्षसम्म हो । मैले त्यो उमेर पुरा गरीसके । अब मेरो त्यसमा भविष्य छैन । त्यसैले त्यता झुण्डिएर मैले समय बर्वाद गर्नुहुदैन भन्ने लागेको छ ।
लोक तथा दाेहाेरी गीतका म्युजिक भिडियोको लोकप्रिय मोडल रश्मीले ६ सय बढी गीतमा मोडलिङ गरेकी छन् भने र तामाङ भाषाका गित र चलचित्रमा समेत अभिनय गरिसकेकी छन् ।
#विवाह भएकाे खुलासा
प्रकाशित: २०७८ वैशाख २६ गते १६:४८
आलियाको ‘गंगुबाई कठियावाडी’ शिवरात्रीमा रिलिज हुने, आउला ‘लप्पन छप्पन २’ ?
‘प्रांक’ गर्नेलाइ गृहको चेतावनीपछि कलाकार खुशी, कसले के लेखे ?
कसले जित्ला ‘बिगबोस १५’ : यी हुन् अन्तिम सात प्रतिस्पर्धी
हल खुलेलगत्तै रिलिज हुनेछन् यी तीन फिल्म : ‘चपली हाइट ३’ रि-रिलिजदेखि हलिउड सुपरहिरोसम्म
पल र मलिका पुनः म्युजिक भिडिओमा एकसाथ : सम्बन्धमा सुधारको संकेत
को बन्ला नयाँ जेम्स बन्ड : एड्रिस अल्बादेखि टम हार्डीसम्मको चर्चा
नेपाली म्युजिक भिडिओले राख्यो गिनिज वर्ल्ड रेकर्ड